Ku hagaaji khibrada isticmaale ee Linux Mint Olivia oo leh Cairo-Dock. | Laga soo bilaabo Linux
Qoraxda wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan koox kasta laakiin Cinnamon Menu muuqda aad u culus kooxo dhex dhexaad ah. Aan aragno sida loo horumariyo tan si kooxdeena ay isla markiiba uga jawaabto.
Xaaladdan oo kale waan doortay ka saar Cinnamon Menu guddi iyo rakibi Qaahira-Dock in kastoo aan rakibi karno Dock kasta oo kale oo aan jecel nahay, habka uu u shaqeeyo waa la mid.
Marka hore waxaan dhagsiiyey batoonka midig ee midig Guddi qorfe ah oo waxaan helay menu-ka macnaha guud, waan dhagsiiyey Ku dar Applets-ka Guddiga .
Hadda waxaan doorannaa saar Liin qorfe guddiga. Anigana waan saaray Qorfe Windows List maxaa yeelay waxaan iska dhigayaa in shaqadan la qabtay Qaahira-Dock hada kadib.
Si loo rakibo Qaahira-Dock ma jiraan wax gaar ah oo la sameeyo, laga bilaabo Xarunta Software waxaan qornaa Qaahira-Dock mashiinka raadinta iyo calaamadee si aad u rakibto.
Hadda waxaan u qaabeyn karnaa Qaahira-Dock inuu ku shaqeeyo bilowga kalfadhigeenna. Tan awgeed waxaan u adeegsan karnaa Nidaamka Dookhyada iyo Ku dar Barnaamijyada si aan u bilowno, ama si fudud u nuqulno oo u dhajinno Qaahira-Dock launcher laga bilaabo / usr / share / applications to ~ / .config / autostart, tan waa inaad ku soo bandhigtaa feylasha horay loo qariyay:
Markaad soo gasho cusub, Qaahira-Dock waxay ku ordi doontaa jawaab deg deg ah oo ku saabsan isdhexgalkayaga tilmaamaha jiirka.
Hadda waxaan ku leenahay Boos weyn oo bilaash ah oo aan uga faa'iideysan karno abuurista duubayaal ama wax kasta oo aan ka fekeri karno, waxaan abuuray aalad wax lagu tuso laguna qariyo Conky laakiin taasi waa sheeko kale. 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Ku hagaaji khibrada isticmaale ee Linux Mint Olivia oo leh Cairo-Dock.
Waa waxa aan raadinayey 😮 Waxaan u beddelay Dugsiga Hoose isla wax isku mid ah 😛, mahadsanid, waan isku dayi doonaa
Jawaab Solidrugs Pacheco
waa qumman tahay, marwalba waxaan isticmaali jiray docky laakiin way cadahay inaan beddelayo ka dib markaan isku dayo. dhanka kale, waa maxay magaca tufaaxa aad ku muujisay fiidiyowga xogta nidaamka? Aad baad u mahadsantahay!
Isaaq calderon dijo
Aad u fiican. Hal su’aal, mowduuc noocee ah ayaa isticmaaleysa? Kaliya waxaan ku rakibey Mint - Olivia buuggeyga netka oo runtii waan ka helay mawduucan. Salaan.
Ujawaab Isaaq Calderon
Xadka daaqadaha waa Bluebird, Faenza-Cupertino Icons, Cinnamon dulucdiisu waa Facebook, iyo Qaahira-Doc waxaan u isticmaalaa qaab guddi caadi ah oo leh astaamaha Faenza-Cupertino.
Aplet-ka dhab ahaan waa conky laga beddelay qaabeyn hore iyo qoraal yar oo ka dhigaya inuu u muuqdo ama la waayo haddii aad riixdo.
Hadda waxaan rakibay LXDE gudaha Linux mint oo wata compiz iyo qaahira, compiz leh lxde wuxuu leeyahay dheelitirka u dhexeeya saameynta muuqaalka, waxtarka iyo xawaaraha. Dabcan waa wax la yaab leh in dhowaan aan daabici doono sida aan u sameeyay.
Aad baad u mahadsantahay. 🙂
* Raadinta… *
galab wanaagsan waxaan qabaa dhowr su'aalood.
Waxaad sheegaysaa in nidaamka si dhakhso leh u socdo waxa aad sameyso waa fureysaa
Cinnamon Menu ee guddiga iyo Cinnamon Windows List maxaa yeelay waxaan rabaa in shaqadaas ay qabato Qaahira-Dock
Ma sharxi kartaa labadan wax qabad; taas oo ah, maxay qabtaan?
su'aasha ugu dambeysa
Inta udhaxeysa Qaahira-dock, loox, AWN, Docky keebaa ugu fiican, midkee ayaad doorbideysaa iyo sababta?
Ku jawaab obv
Waxay si fudud u dilaan menu-ga weyn ee qorfe iyo liiska daaqadaha furan. Labadaas wax qabad waxaa keenay Qaahira - haddii kale waa lagu celin lahaa.
Marka laga hadlayo midka ugu fiican… waa wax shaqsiyan u gaar ah. Waxaan doorbidayaa Qaahira-dock laakiin inta soo hartay aad ayey ufiicanyihiin mid walibana wuxuu xooga saaraa arimo kala duwan Taladayda: isku day dhammaantood. In Linux waa wax fudud ...
Samba: Hordhac lagama maarmaan ah